Blockstream को पूर्व विकासकर्ताहरूले blockchain मा एक सुपर कम्प्युटर बनाउन - Blockchain समाचार
बेन Gorlick र जनी Dilly को decentralized आफ्नै परियोजना मा काम गर्न विकासकर्ताहरूले को Blockstream टोली बाँकी क्लाउड कम्प्युटर भीड मिसिन. Gorlick प्रौद्योगिकी निर्देशक छ, र Dilli सिस्टम वास्तुकला को टाउको छ.
विकासकर्तालाई बादल गणनाको प्रणाली सुधार आवश्यक भनेर विश्वास, र भीड मिसिन एक blockchain समाधान प्रदान गर्दछ. एक decentralized क्लाउड कम्प्युटर छिटो र सस्ता आवेदन सिर्जना कुनै पनि ब्लकर मा प्रक्रिया गर्नेछ: “हामी के काम गर्दै जो सफ्टवेयर सिर्जना र चलिरहेको छ नियमहरू परिवर्तन हुनेछ,” Gorlick Coindesk एक कुराकानीमा भन्नुभयो.
परियोजना कि भाग्य को सूची मा हो धेरै कम्पनीहरु समावेश 500 कम्पनीहरु, जीई र गान सहित. क्षणमा, विकासकर्ताहरूले को घेरा गर्न आवेदन मा सिस्टम परीक्षण छन् Ethereum.
Blockstream को एक पूर्व सदस्य रूपमा, बेन Gorlik तिनीहरूलाई आधारित थप उत्पादन सिर्जना गर्न blockchains मिसिन प्रयोग गर्न धेरै गाह्रो छ भन्ने तथ्यलाई समस्या देख्नुहुन्छ. नयाँ प्रणाली को सिद्धान्त व्याख्या, उहाँले अनुप्रयोग-पात्रो cites. सामान्यतया यस्तो गुगल क्लाउड वा Amazon वेब सेवा रूपमा बादलले मंच मा निर्माण गरिएको छ. तर एक प्रयोगकर्ता हरेक समय सक्रिय छ, एक शुल्क विकासकर्ता देखि आरोप लगाएको छ. Gorlick यो सिस्टम एक हो भनेर विश्वास गर्दछन् “bottleneck”, जो लागत उच्च निम्त्याउँछ.
भीड मिसिन को प्रभावकारिता कुनै पनि प्रयोगकर्ता गतिविधिको धेरै भागहरु बिच्छेदन र त्यसपछि छ उपकरणहरूको नेटवर्क पुनः निर्देशित तथ्यलाई कारण छ, जो प्रत्येक आफ्नो प्रक्रिया मा लगी भएको छ. यसरी, आवेदन सुरु र कार्यक्रम चल्छ, तर प्रयोगकर्ता एक प्रदायक बाँधिएको छैन.
पनि, अनुप्रयोगको प्रयोगकर्ता उपकरणहरू को सबै प्रकार मा कार्यक्रम सुरु लागि इनाम प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ: ल्याप्टप, स्मार्टफोन र पनि उपकरणहरू “कुरा को इन्टरनेट”. कम्प्युटर एक को विचार प्रयोग “बलियो महासंघ”, जो Gorlick र Dilly सिर्जना Blockstream. यो नोड्स कोड सही कार्यान्वयन हुनेछ ग्यारेन्टी.
एउटै समयमा, भविष्यमा भीड मिसिन आधारित आवेदन विकासकर्ताहरूले पनि कार्यक्रम बारेमा जान्न आवश्यक छैन: भीड अनुप्रयोग स्टुडियो तपाईं तानेर-र-ड्रप मोडमा भिडियो इन्टरफेस प्रयोग गरेर सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ.
“एक स्मार्ट सम्झौता लेखन भयावह सुनिन्छ. हामी बाधाओं हटाउन आवश्यक”, बेन Gorlick विश्वास गर्छ.
त्यसैले, स्मार्ट अनुबंध सिर्जना गर्न तपाईं Ethereum को कार्यक्रम भाषा दृढता ज्ञान बिना. र भविष्यमा सेवा अन्य कार्यक्रम भाषाहरू समर्थन हुनेछ, सहित लिपि Bitcoin.
अघिल्लो पोस्ट:deVere समूह cryptocurrency व्यापार अनुप्रयोग शुरूआत
अर्को पोस्ट:विभिन्न देशहरूमा, Bitcoin मूल्य फरक हुन सक्छ